74 mabhuku anokurudzirwa naBorges | Zvazvino Zvinyorwa
74 mabhuku anokurudzirwa naBorges
Muna 1985, iyo Imba yekutsikisa yeArgentina Hyspamérica, rakaburitswa raizove raibhurari yega yaBorges. Raibhurari iyi inosanganisira iyo 74 mabhuku anokurudzirwa naBorges, uyo akamboaverenga, akafadza munyori weArgentina zvekuti aida kuvakurudzira pachena kune vese vanoda mabhuku.
Borges iye aive achitarisira kugadzira iyo prologues kune mazita aya makumi manomwe nemana. Aida kusvika pamazana, asi zvinosuwisa muna 74, akafa nekenza yechiropa.
Mukusarudzwa kwemabhuku, Borges haana kutevera chero mhando yeparamende, asi raive runyorwa rwakasiyana zvachose, urwo aingoda kugovana nemunhu wese. Mamwe emashoko ake aive:
Regai vamwe vazvirumbidze nemabhuku avakapihwa kuti vanyore; Ndinozvirumbidza nezveavo vandakapihwa kuti ndiverenge… ndinoshuvira kuti raibhurari iyi ive yakasiyanasiyana sekuda kugutsikana kuri kunditungamira, uye kuri kuramba kuchinditungamira, mukutsvaga mitauro yakawanda uye zvinyorwa zvakawanda. "
Inogadzira raibhurari yako wega
Julio Cortazar: "Nhau"
Franz Kafka: "America" ​​uye Pfupi Nhau
Gilbert Keith Chesterton: "Muchinjikwa webhuruu nedzimwe nyaya"
Maurice Maeterlinck: "Kungwara kwemaruva"
Dino Buzzati: "Renje reTartars"
José María Eça de Madziva "Mandarin"
Leopold Lugones: "Humambo hwemaJesuit"
Andre Gide: "Zvikwama zvenhema"
Herbert George Wells: "Nguva yenguva" y "Munhu asingaoneki"
Robert Makuva: "Ngano dzechiGiriki"
Fyodor Dostoevsky: "Madhimoni"
Edward Kasner naJames Newman: «Masvomhu uye fungidziro»
Eugene O'Neill: "Mwari Mukuru Brown" y "Strange kupindira"
Herman Melville: "Benito Cereno", "Bily Budd" y "Bartleby, mabharani"
Giovanni Papini: "Njodzi yezuva nezuva", "Mutyairi bofu" y "Mashoko neropa"
Arthur Machen: "Vanyengeri vatatu"
Shamwari Luis de Leon: "Rwiyo rwenziyo" y "Chiratidziro cheBhuku raJobho"
Joseph Conrad: "Mwoyo Werima" y "Netambo muhuro make"
Oscar Wilde: "Essays uye dialogues"
Henri Michaux: "Mutorwa muAsia"
Hermann Hesse: "Mutambo wevarimi"
Enoch A. Bennett: "Kuvigwa uri mupenyu"
Claudius Eliano: «Nhoroondo yemhuka»
Thorstein Veblen: "Dzidziso yeiyo Leisure Kirasi"
Gustave Flaubert: "Miedzo yaSanta Anthony"
Marco Polo: "Tsananguro yenyika"
Marcel Schwob: "Anofungidzira anorarama"
George Bernard Shaw: "Kesari naCleopatra", "Mutungamiriri Bharari" y "Candida"
Francis Quevedo: «La Fortuna nehuropi uye nemunhu wese nguva» y "Marco Bruto"
Edheni Phillpotts: Iyo Redmayne Reds
Soren Kierkegaard: "Kutya nokudedera"
Henry James: "Chidzidzo chemudzidzisi", "Hupenyu hwega" y "Mufananidzo uri pakapeti"
Herodotus: "Mabhuku mapfumbamwe enhoroondo"
Rudyard Kipling: "Nhau"
Jean Cocteau: "Nyanzvi yekuvanzika uye zvimwe zvinyorwa"
Thomas deQuincey: "Mazuva ekupedzisira aEmmanuel Kant nezvimwe zvinyorwa"
Ramon Gomez de la Serna: «Sumo kubasa raSilverio Lanza»
Antoine Galland: "Husiku hweArabia" (kusarudzwa)
Robert Louis Stevenson: "Husiku hutsva hweArabia"
Leon Bloy: "Ruponeso nemaJuda", «Ropa revarombo» y "Murima"
Bhagavad Gita. "Nhetembo yaGilgamesh"
Juan Jose Arreola: "Nhau dzinonakidza"
David Garnett: «Kubva lady kusvika gava», "Murume ku zoo" y «Kudzoka kwemufambisi wechikepe»
Jonathan Swift: "Mafambiro aGulliver"
Paul Groussac: "Kutsoropodza mabhuku"
Manuel Mujica Lainez: "Zvidhori"
John Ruiz: «Bhuku rerudo rwakanaka»
William Blake: "Nhetembo dzakakwana"
Hugh walpole: «Murima nzvimbo»
Ezequiel Martínez Shona: «Nhetembo basa»
Edgar Allan Poe: "Nhau"
Publio Virgilio Maón: "Iye Aeneid"
JW Dunne: "Kuedza nenguva"
Attilio Momigliano: "Rondedzero paOrlando Furioso"
William James: "Izvo zvakasiyana zvechiitiko chechitendero" y "Dzidza nezvehunhu hwevanhu"
Snorri Sturluson: «Saga raEgil Skallagrimsson»
Kana iwe uchida kuverenga zvirevo izvi tinya pano. Kune huwandu hwakazara hwemapeji makumi manomwe nemaviri uko Borges inopa zvinopfuura zvikonzero zvekuverenga mabhuku aya. Kana iwe uri muteveri akatendeka wemunyori uyu nebasa rake, haugone kumira kuverenga kapfupi aka Borges biography matiri kuongorora zvese zveupenyu uye zvekunyora zvemunyori weBuenos Aires.
Progue yaBorges ku "Ngano" naEdgar Allan Poe
Semuenzaniso uye kutarisira, tinokusiira chirevo chakanyorerwa naBorges kuTales chakanyorwa natenzi wekutyisa, Edgar Allan Poe. Nakidzwa nayo!
Zvinyorwa zvemazuva ano hazvifungiki pasina Whitman uye pasina Poe. Zvakaoma kwatiri kuti tifungidzire vamwe vanhu vaviri vakasiyana, kunze kwekunge murume wega wega akasiyana. Edgar Poe akazvarwa muna 1809 muBoston, guta raaizosema gare gare. Nherera pazera remakore maviri, yakagamuchirwa nemushambadzi, VaAllan, vane zita rekupedzisira raive zita ravo repakati. Akakurira muVirginia uye aigara achizivikanwa kubva kumaodzanyemba. Akange akadzidziswa kuEngland. Chiyeuchidzo chekugara kwake kwenguva refu munyika iyoyo ndiko kutsanangurwa kwechikoro chine zvivakwa zvekuda kuziva zvekuti munhu haazomboziva kuti chiri pauriri. Muna 1830 akapinda muWest Point Mauto Academy, kwaakadzingwa nekuda kwake kwekubheja uye kunwa. Ane hukasha uye ane hushamwari mune zvakasikwa, aive zvakadaro anoshanda nesimba uye akatisiira mavhoriyamu mashanu erupo rweprose uye vhesi. Muna 1835 akaroora Virginia Clemm, aive nemakore gumi nematatu. Semudetembi, haakosheswe munyika yekumusha pane kune mamwe matunhu epasi. Nhetembo yake ine mukurumbira "Mabhero" akatungamira Emerson kumutumidza zita rekuti jingle murume. Akadonha nevamwe vake vese; akapomera zvisina musoro Longfellow kubiridzira. Paakadaidzwa kuti mudzidzi wevanoda zvechiGerman, akapindura achiti: 'Horror haibve kuGerman; kunobva mumweya. Aigara achiwanza "kurira-kuzvinzwira tsitsi" uye maitiro ake ndeanopindirana. Akadhakwa, akafira mukamuri rakajairika rechipatara cheBaltimore. Mune dhiriyumu akadzokorora mazwi aakange aisa mumuromo wemufambisi wechikepe uyo akafa, mune imwe yenyaya dzake dzekutanga, kumucheto kweSouth Pole. Muna 1849 iye nemufambisi wechikepe vakafa pamwe chete. Charles Baudelaire akashandura basa rake rese muchiFrench uye ainamatira kwaari manheru ega ega. Mallarmé akatsaura sonnet inozivikanwa kwaari. Kubva pane imwe ngano yekufambidzana kwake kubva muna 1841, "The Murders in the Rue Morgue," inoonekwa muvhoriyumu iyi, inouya yese mhando yemutikitivha: Robert Louis Stevenson, William Wilkie Collins, Arthur Conan Doyle, Gilbert Keith Chesterton, Nicholas Blake, nevamwe vakawanda. Kubva pamabhuku ake anodakadza ngatirangarirei "Izvo Zviri Munyaya yaVaValdemar" "Kudzikira muMaelström", "Gomba uye Pendulum", "Ms. Inowanikwa muBhotoro "uye" Murume weRuzhinji "zvese zvisinganzwisisike zvekugadzirwa. Mu "Iyo Philosophy yeComposition" huru yekudanana inozivisa kuti kuita kwenhetembo chiitiko chehungwaru, kwete chipo chemuseuzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » 74 mabhuku anokurudzirwa naBorges
Diana Watts akadaro
Ndatenda nechinhu ichi !!!
Pindura kuna Diana Watts
5 zvinyorwa zvekare zvezana ramakumi maviri nemasere
Raibhurari yaNeil Gaiman muMifananidzo